Jarmalku Wuxuu Kusoo Dhawaaday Sharciyeynta Xashiishada • Dawooyinka Inc.eu
Khamiis, June 30 | 2022
Saynis yahanadu waxay ka helaan THC in ka badan 60 boqolkiiba…
Daroogadu waa badeecada ugu weyn ee taliska Asad dhoofiyo
CBD waxay leedahay awood antibiyootik ahaan
Isku-dhafka Ruuxa Hindida (xawaashka): Rasta High
Waa waqtigii siyaasad ka duwan kan daroogada
Wasaaradda waxbarashada Thailand waxay doonaysaa aagagga ka caagan xashiishadda...
Cilmi-baaris cusub oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya isticmaalka xashiishadda iyo…
Michael Pollan: Docu-taxane ku saabsan daawaynta dhimirka ee Netflix
Iskaashiga Yurub ee dhakhaatiirta dhimirka ee...
Xashiishka ma yarayn kartaa isticmaalka antibiyootiga ee warshadaha xayawaanka?
Bogga ugu weyn cannabis Jarmalku waxa uu ku dhawyahay sharciyaynta xashiishka
cannabisWararkaSharci dejinta & Sharci dejinta
Jarmalku waxa uu ku dhawyahay sharciyaynta xashiishka
albaabka Ties Inc. November 11 2021
maqaal by Ties Inc. November 11 2021
Isbahaysiga soo socda ee dawladda Jarmalka, si kastaba ha ahaatee, waxa uu soo dhowaanayaa heshiis lagu sharciyeynayo xashiishadda isticmaalka madadaalada. Calaamadda ugu xooggan ilaa hadda in kobaca la sugayo ee suuqa marijuana Yurub uu hadda dhab ahaantii sii socdo.
1 Mustaqbalka xashiishadda weli lama hubo
2 Laga soo bilaabo xashiishadda caafimaadka ilaa xashiishadda madadaalada
3 UN ayaa ka saartay xashiishadda liiska daroogooyinka adag
Wada-xaajoodayaal ka kala socda Socialdemokraterna, Greens iyo Free Democrats ayaa ku dhufanaya faahfaahinta. Oo ay ku jiraan shuruudaha iibinta iyo isticmaalka xashiishadda madadaalada waa in la oggolaadaa lana xakameeyaa. Waxay qayb ka yihiin wada xaajoodyada ballaaran ee lagu dhisayo dowlad cusub.
Mustaqbalka xashiishadda weli lama hubo
Ma jiro go'aan kama dambays ah oo laga gaaray xashiishadda, natiijaduna way isbedeli kartaa. Afhayeennada xisbiyada Greens iyo SPD ayaa diiday inay ka hadlaan dhinac kasta oo wadahadalka isbahaysiga ah. Af hayeenka FDP si degdeg ah ugama jawaabin codsi ku saabsan qorshaha xashiishadda.
Heshiis ku saabsan sharciyeynta ma noqon doonto mid aad loola yaabo. Wada-hawlgalayaasha cusub ee isbahaysiga ee suurtogalka ah ayaa aad ugu furfuran fikradda marka loo eego Angela Merkel's Christian Democrats, kuwaas oo xukunka hayay tan iyo 2005.
Talaabadani waxay keeni kartaa dakhli cusub oo cashuureed waxayna faa'iido u noqon kartaa shirkadaha xashiishadda ee Maraykanka iyo Kanada, iyo sidoo kale warshado Jarmal ah oo kobcaya oo ay ku jiraan shirkadaha sida Cantourage GmbH iyo Synbiotic SE.
Laga soo bilaabo xashiishadda caafimaadka ilaa xashiishadda madadaalada
Beeralay badan oo xashiishad ah ayaa durba cagta ka soo galay albaabka Yurub iyaga oo u sii maraya shirkadaha caafimaadka waxayna isu dhigeen inay ka faa'iidaystaan ​​suuq madadaalo oo ballaaran. Curaleaf Holdings Inc., oo ah hawl-wadeenka dawlad-goboleedka ugu weyn ee Maraykanka, ayaa iibsaday Emmac Life Sciences Ltd. horaantii sanadkan si ay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato. Guddoomiyaha Curaleaf Boris Jordan waxa kale oo uu saami ku leeyahay bilowga Algea Care ee fadhigeedu yahay Frankfurt.
Tilray Inc. waxay laan ku leedahay Portugal waxayna rabtay inay ka iibiso marijuana Yurub oo dhan. Hawl-wadeennada kale ee Kanada, sida Aurora Cannabis Inc. iyo Canopy Growth Corp., sidoo kale hadda u adeega suuqa caafimaadka Jarmalka.
UN ayaa ka saartay xashiishadda liiska daroogooyinka adag
Qaramada Midoobay ayaa go'aansatey dabayaaqadii sanadkii hore in laga saaro marijuana liiska daroogooyinka adag, oo ay ku xigto qoondaynta guddiga Yurub ee cannabidiol.
Ra'yiga dadweynaha ee Jarmalka ayaa sidoo kale u wareegay dhinaca sharci-dejinta. Sahan ay sameeyeen dhamaadkii bishii Oktoobar ee ururka Hemp ee Jarmalka, 49% jawaab bixiyaashii waxay sheegeen inay taageersan yihiin sharciyeynta xashiishadda, tusaale ahaan dukaamada khaaska ah sida Maraykanka iyo Kanada, marka la barbar dhigo 46% kuwaas oo weli diidan. Waa markii ugu horreysay tan iyo 2014-kii in dad badan ay ku horreeyaan codbixinta sannadlaha ah.
Akhri wax dheeraad ah Bloomberg.com (Source, EN)
0 faallo 0 FacebookTwitterPinterestEmail
Daawooyinka cusub ee maskaxda 'Rinji' ee suuqa
Maxaa dhacaya marka aad xashiishadda ku qasto dhakhaatiirta dhimirka?
Dambiyada daroogada ee Nederland iyo dhaqanka rabshadaha ayaa sii kordheysa xad-dhaaf ah
CBD ma tahay isticmaal badbaado leh?
Sayidka daroogada 'Boston George': Johnny Depp wuxuu ku soo laabtay…
Faallo ka tag Jooji jawaabta
Ku keydi magacayga, iimaylka, iyo degelkayga browser-kan marka xigta ee aan faallo ka bixiyo.
Doog duug ah oo boorsooyin duug ah ku jira
Caadi ahaan ku saabsan daroogada
saamiyada America maalgelinta Canada Canna-Tech cannabis beerista cannabis CBD saliid cbd cocaine dembi go'aan qaadasho daroogada edibles Europa maaliyad ahaan caafimaad leh caafimaadka xagasha sharci ahaan sharciyeynta sharci-dejinta lsd mdma daawo daawo cannabis daawada cawska microdosing Nederland cilmi baaris boqoshaada maskaxiyan daraasadda mukhaadaraadka synthetic THC Maraykanka Boqortooyada Ingiriiska qabatinka cunto Adduunka oo dhan sharciga saliida cannabis baaritaanka weed beerista cannabis xtc
Saynis yahanadu waxay THC ka helaan in ka badan 60 boqolkiiba alaabta CBD ee la tijaabiyay
Copyright DrugsInc.eu - Xuquuqda oo dhan 2022
Sidoo kale xiiso lehx
Bank of America ayaa xidhay akoon bangi oo ay FDA ogolaatay...
24 Oktoobar 2021
Maandooriyaha Marijuana waxay ku xiran tahay hidaha
Cannabis ma kordhin kartaa awoodda borotiinka…